(LA-YAABKA & SAWIRO): Nin u tartamayo Shaqsiga ugu afka weyn Caalamka. – Radio Dalsan FM 91.5 MHz | Warar Sugan | Somalia News
(LA-YAABKA & SAWIRO): Nin u tartamayo Shaqsiga ugu afka weyn Caalamka.
Inkastoo uu Nin u dhashay dalka Hindiya oo lagu magacaabo Dinesh Shivnath Upadhayaya uu haysto Rekoodhka Diiwaanka Af weynida Caalamka, ayaa waxaa haddana Jagadaasi u ololeynaya Nin dhallinyarro ah oo u dhashay dalka Nepal oo lagu magacaabo Raja Thapa.
Wiilkaasi oo 19 jir ayaa waxa uu haatan awoodi karaa inuu afkiisa geliyo 138 qalimaadka Laabis-qoriga (Pencils), halka uu Ninka haatan haysta Horyaalka Afweynida Caalamka ee Dinesh Shivnath Upadhayaya uu afkiisa gelin karo 92 qalin-qoriga ama Laabis-qoriga.
Raja Thapa waxa uu faruurihiisa u kala jiidi karaa sida Balaastikadda oo kale, isagoo ku dhaweynaya Madaxiisa.
Waxa kale oo uu awoodaa inuu ilkihiisa ku qabto 32 Shumacyo shidan.
Raja Tapa oo shaqadiisu tahay Ilaaliye Ammaanka (Security Guard) waxa uu qorsheynayaa inuu si joogto ah Bandhig ugu sameeyo Waddooyinka iyo inuu isku tijaabinayo sidii uu u jebin lahaa Rekoodhka Adduunka ee Af-weynida.
“Waxaan doonayaa in la iigu yeero Geesiga Waddada ee Nepal (The Street Hero of Nepal)” ayuu yiri.
Si kastaba ha ahaatee, Ninkaasi lagu naanayso “Af-weyne ama Af-ballaar” bal malee imisa Kiilo oo baasto ah ayuu hal mar raamsan karaa, waxaana fiicnaan lahayd inuu iska noqdo kuwa ku tartama Cunista Raashinka (Cunaayaasha ama Maanjatoorayaasha) ama uu noqdo Saaxibul-wiido ee ah kuwa ay Soomaalida ugu yeeraan Sab-gaadka iyo Kaluundiga!!!
DAAWO SAWIRADA: Dabkii ka kacay Matoorka Diyaaradda Daallo Airlines